» नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग २३
नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग २३
२ श्रावण २०७७, शुक्रबार ०९:२७
मकवानपुर, २ साउन । नेपालको आफ्नै सिंगिङ रियालिटी शो ‘ वाईवाई नेपाल स्टार’ को काठमाडौँ अडिसनबाट केही प्रतियोगीहरु दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएका छन् । दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएका प्रतियोगीहरुको जानकारी दिने उदेश्यले तयार पारिएको यस भिडियो सिरिजको यो २३ औँ भाग हो । यस भागमा काठमाडौँ अडिसनबाट छानिएका ५ जना प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । यस भागमा कृष्ण बी राई, साक्षी खनाल, मौसम खरेल, सञ्जय लिम्बु र शंकर योङहाङ लिम्बुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । अन्य प्रतियोगीहरुका बारेमा जान्न हाम्रो च्यानलका थप भिडियोहरु हेर्नुहोस् ।
१) कृष्ण बि राई–नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएका पहिलो प्रतियोगी हुन् कृष्ण बि राई । अबि राईका नामले चिनिने उनले अडिसनमा ‘उनको त पदचाप’ बोलको गीत गाएका थिए । नृत्यमा समेत अब्बल कृष्णलाई सोही गीतबाट निर्णायकहरुले छनौट गरेका हुन् । अबि कोरियोग्राफरका रुपमा कार्यरत छन् ।
२) साची खनाल–नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएकी दोस्रो प्रतियोगी हुन् साची खनाल । नुवाकोट निवासी साची १७ वर्षकी छिन् । बिगत ४ वर्षदेखि संगीत सिक्दै गरेकी साक्षी आर्टमा पनि रुचि राख्छिन् । करिब ७ महिना आर्ट पनि सिकेकी उनी सानैदेखि आफुलाई संगीतमा रुचि भएको बताउँछिन् । सानैदेखि गीत गाउन रुचि भएता पनि बिचमा संगीत क्षेत्रबाट केही टाढा बसेकी साचीलाई दिदीले फेसबुकमा पोष्ट गरिदिनुभएको उनको भिडियोले फेरि संगीत क्षेत्रमा लाग्ने ईच्छा जगायो । उक्त भिडियोमा सबैको राम्रो कमेन्टहरु आएपछि उनी संगीतमा फेरि सक्रिय हुन थालिन् । उनले अडिसनमा ‘पानी मिठो’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । पहिलो गीतबाट निर्णायकहरुलाई प्रभावित गरेकी उनले दोस्रो पटक ‘कहिले काँही मलाई पनि’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनी सोही गीतहरुबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएकी हुन् ।
३) मौसम खरेल–नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएका तेस्रो प्रतियोगी हुन् मौसम खरेल । झापा स्थायी घर भई काठमाडौँ बस्दै आएका मौसमले अडिसनमा ‘गोरेटो त्यो गाउँको’ बोलको गीत गाएका थिए । पहिलो गीतमा निर्णायकहरुको मन जित्न सफल भएका मौसमले त्यसपछि ‘के यो माया हो’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी त्यही गीतहरुबाट दोस्रो चरणका लागि छनौट भएका हुन् ।
४) सञ्जय लिम्बु–नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएका चौथो प्रतियोगी हुन् सञ्जय लिम्बु । झापा स्थायी घर भएका सञ्जय अडिसनमा ‘नचाहेको होईन तिमीलाई’ बोलको गीत गाएका थिए । पहिलो गीत राम्रो गाएका सञ्जयले त्यसपछि ‘हेर्दा राम्रो माछापुछ«े’ बोलको गीत गाएका थिए । दोस्रो गीतमा उनले निर्णायकहरुलाई थप प्रभावित बनाएका थिए । उनी सोही गीतहरुबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका हुन् ।
५) शंकर योङहाङ लिम्बु–नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएका पाँचौँ प्रतियोगी हुन् शंकर योङहाङ लिम्बु । उनी यसअघि नेपाल आईडलमा समेत सहभागी भएका थिए । उनी विभिन्न सांगितिक कार्यक्रमहरुमा पनि सक्रिय छन् । उनले नेपाल स्टारको अडिसनमा ‘मेरो आँखामा भरदिन’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका हुन् । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईलाई यी प्रतियोगीहरुमध्ये कसको आवाज मनपर्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।